သေးငယ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > သေးငယ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
2. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: အဆိုပါ shell ကို anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
3. Wide torque အကွာအဝေး: AOX-R ကိုသေးငယ်တဲ့လေးပုံတစ်ပုံ၏ torque လျှပ်စစ် actuator turn 30Nm-5000Nm ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
4. တိုက်နယ်: ထိန်းချုပ်ခြင်း circuit ကို Single-အဆင့်သို့မဟုတ်သုံးခု-အဆင့် power supply စံနှင့်တွေ့ဆုံ circuit ကို layout ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ပါတယ်, ဆိပ်ကမ်းကိုထိရောက်စွာအပိုဆောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ actuator ၏ shell ကိုပု matrix ကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေသည်ရာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကြောင့်သင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာနေသည်။ စက်ပြီးနောက်, မျက်နှာပြင်ဓါတ်တိုးခြင်းနှင့်ပက်ဖျန်း, နှင့်မျက်နှာပြင်ခိုင်မာတဲ့ချေးခုခံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ AOX-R ကိုသေးငယ်တဲ့လေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သဏ္ဌာန်ကိုပိုမိုလက်ရာမြောက်သောနှင့်လက်တွေ့ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြှင့်အသွင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့၏ modulating module adopts external installation, and the bare board heats up better. AOX-R small quarter turn electric actuator solves the contradiction that the maximum temperature of the actuator is 120 °C and the electronic element temperature of the module is only 70 °C.
ကျွန်တော်တို့၏ company has been engaged in the manufacture of electric actuators for more than 20 years. It has mature manufacturing technology and perfect production equipment, with an annual production capacity of 60,000 electric actuators. The main processing equipment includes machining center, CNC lathe, CNC milling machine, CNC drilling machine, CNC drilling machine, plasma spray welding equipment, spray drying line and other equipment, milling, boring, drilling, throwing, grinding and other types of machine tools More than 300 sets of equipment, equipment are purchased from well-known domestic companies, high production efficiency, high processing accuracy.
ကျွန်တော်တို့၏ company investedalarge amount of funds in technology development for technology research and development and new product development. There are 89 patents in total, including3invention patents, 27 utility model patents, 49 design patents, and4invention patents.2utility model patents.
ကျွန်တော်တို့၏ company has obtained various domestic and foreign certifications such as IS09001, ISO14001, CE, ATEX, GOST, EAC, SIL3, IP68, CU-TR, explosion-proof, etc., which fully demonstrates that our products fully comply with international standards, and the quality of products is guaranteed.
hot Tags:: သေးငယ်သော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်